အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသမဝါယမဖောက်သည်ကုမ္ပဏီ - 1D စက်ရုံ | 1D;ONE
1D; အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖောက်သည်ကုမ္ပဏီ - 1D စက်ရုံ, ကုန်တင်ထောက်ပံ့ရေးအဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ
1D အကောင်းဆုံးသမဝါယမဖောက်သည်ကုမ္ပဏီ - 1D, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
2. အင်ဂျင်မှာ gasket ကဘာလဲ။
1& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
2. သန်စွမ်းသုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ
3.cargo ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်အဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ
4.Japan npr နည်းပညာနှင့် 170 သည်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
1D အကြောင်း; တစ်ခု
1D Auto Corporation သည်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်တောင်အာရှ Guang Zhou စီးတီးတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပစ္စတင်, လက်စွပ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအစုအဝေး, စသည်တို့ Toyota, Mitsubishi နှင့် ISUZU OEM ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်ပူးပေါင်းသည့်တရုတ်၏ထိပ်တန်းသုံးပင်းအိုးနှင့်0တ်စုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ 1D ကုမ္ပဏီမဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ 1: ခိုင်မာတဲ့သုတေသန& နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အင်ဂျင် 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, 200,000 PCS ပစ္စတင်လက်စွပ်။ 2.fachility& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များ, ဂျပန် NPR နည်းပညာနှင့် 170 သည်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ 3.cargo ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်အဆင်ပြေ& စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်ရန်အတွက်တောင်တရုတ်ပင်လယ် Zhou စီးတီးရှိစက်ရုံကမ်းခြေရှိစက်ရုံဂိုဒေါင်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ပါ။ 4. ကတ် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
1. သန်စွမ်းသုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ
2.32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်
3.japan npr နည်းပညာနှင့် 170 သည်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
4.care ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်အဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ